JAMES SWAN oo gaaray Dhuusamareeb + Ujeedka - Caasimada Online
Home Warar JAMES SWAN oo gaaray Dhuusamareeb + Ujeedka
JAMES SWAN oo gaaray Dhuusamareeb + Ujeedka
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Amb. James Swan iyo wafdi u hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.
James Swan & wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi ku soo dhoweeyey madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug, Cali Daahir Ciid.
Intaasi kadib ayaa wakiilka Qaramada Midoobay iyo xubnaha la socda loo galbiyey madaxtooyada Galmudug oo uu kulan kula yeelan doono madaxweyne Qoor-Qoor.
Kulankan ayaa waxaa intiisa badan diirada lagu saari doonaa xaaladda dalka, gaar ahaan is marin-waaga ka taagan arrimaha doorashooyinka 2021-ka.
Swan ayaa maalmihii u dambeeyey wada wada-tashiyo ku aadan muranka ka jira doorashooyinka, isaga oo kulan hab maqal & muuqaal ah la yeeshay madaxda maamulada Puntland & Jubbaland oo ka biyo diidan hannaanka doorashad 2021.
Soomaaliya ayaa waxaa ku soo food-leh doorasho isugu jirto tan baarlamaanka & madaxweynaha, waxaana hareeyey khilaaf u dhexeeya dowladda & mucaaradka.